Ọhụrụ asaa Knights 2 na-amalite n'ụwa niile site na iji egwuregwu egwuregwu efu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ọhụrụ asaa Knights 2 na-amalite n'ụwa niile site na iji egwuregwu egwuregwu efu
Ndị na-akwado Netmarble mbụ na nke na-eme egwuregwu mkpanaka mkpanaka asaa ndị Knights nwere ike ịmalite ugbu a na isi cinematic ọhụrụ, nke miri emi na nke immersive nke franchise ka asaa Knights 2 na-eme ọkwa mbụ ya zuru ụwa ọnụ. Egwuregwu ahụ dị ugbu a dị ka nbudata efu na App Store na Google Play. Ndị ọrụ nwere ike na-ekiri ihe niile-ọhụrụ video maka igba egbe on theOfficial Seven Knights 2 YouTube Channel.
asaa Knights 2 na-ewere ọnọdụ afọ 20 ka egwuregwu asaa Knights mbụ gasịrị. Akụkọ ọhụrụ a gbadoro ụkwụ na Daybreak Mercenaries nke Lene, ada Eileen, bụ onye so na ndị asaa Knights na egwuregwu izizi. Ndị Mercenaries Daybreak malitere njem iji chọta Rudy, onye ikpeazụ n'ime ndị Knight asaa, ka usoro ihe omume metụtara otu nwa agbọghọ dị omimi aha ya bụ Phine. Ndị Fans gburugburu ụwa nwere ike ịmalite ịchịkọta na ịzụlite ndị dike na-adọrọ adọrọ mgbe ha na-ekere òkè na akụkọ sinima miri emi na nke na-adọrọ adọrọ.
Iji mee mmemme mmalite egwuregwu ahụ, Netmarble na-eme atụmatụ mmemme “New Mercenary Commander Special Daily Login”, na-enye ndị ọrụ ohere imeghe ụgwọ ọrụ dị iche iche, gụnyere Legendary Grade 'Saint of Light Karin' n'elu 7th ụbọchị nbanye na egwuregwu.
Isi ihe ndị egwuregwu nwere ike ịtụ anya na mmalite gụnyere:
• Ndị dike Charismatic na-anakọta: Enwere ngụkọta nke mkpụrụedemede 46 dị maka ịnakọta na mmalite, gụnyere agwa ama ama sitere na ndị ọchịagha asaa mbụ nke ndị ọhụrụ asaa Knights 2 jikọtara.
• Ọgụ ndị isi na-ama aka:
Ndị na-egwu egwuregwu nwere ike ịtụ anya ịhazi atụmatụ dị iche iche site na iji usoro dike dị iche iche, nhazi na anụ ụlọ
o Na mgbakwunye, ndị egwuregwu ga-alụ ọgụ site na iji nkà nwere ihe ngosi dị ịtụnanya, ebe ha na-ekere òkè na ọgụ otu oge na-achịkwa ihe ruru dike anọ n'otu oge.
• Akụkọ Cinematic miri emi, Immersive: asaa Knights 2 nwere akụkọ miri emi na nke na-emikpu nwere awa abụọ nke ihe nkiri cinematic dị elu maka ndị na-egwu egwuregwu ga-ekpori ndụ.
Seven Knights 2 bụ ihe nkiri sinima nke RPG na-enye ohere ka ndị egwuregwu na-anakọta ma zụlite ndị dike nwere ụdị na nha niile ka ha na-etinye aka na akụkọ sinima miri emi ma na-emikpu n'ihi njikwa oge na nbudata egwuregwu na njikọta ọnụ ọgụgụ dike, nhazi na nhazi. anu ulo. N'ịkọnye ụdị agwa dị iche iche nke eserese mara mma dị elu nke Unreal Engine 4 kwadoro, asaa Knights 2 ga-emikpu ndị egwuregwu n'ezi usoro nke na-egosipụta ihe ọchị na egwuregwu ọhụrụ nke asaa Knights nke ndị egwuregwu gburugburu ụwa na-enwe.
Ruo taa, asaa Knights ahụla ihe nbudata nde 60 n'ụwa niile. Ndị Knights asaa enweela ihe ịga nke ọma na Korea, ebe ha nwetara #2 na App Store yana #1 na Google Play n'ihe gbasara ego enwetara na mbido Nọvemba 2. Na-esochi mmalite zuru ụwa ọnụ, asaa Knights 2020 ga-adị njikere igwu egwu n'asụsụ iri na abụọ, gụnyere Bekee, Japanese, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Thai, Portuguese, Spanish, German, Italian, French, Russian na Indonesian.